Puerto Rico tamin'ny fitokonana: An'hetsiny no mitaky ny fialan'ny Governora
Home » Toerana fitsangatsanganana » Puerto Rico tamin'ny fitokonana: An'hetsiny no mitaky ny fialan'ny Governora
Jolay 22, 2019
by Lehiben'ny famoahana andraikitra
Mpanoratra Lehiben'ny famoahana andraikitra
An-jatony ny mpanao fihetsiketsehana no nandrasana handray ny iray amin'izy ireo An'i Puerto Rico lalambe be olona indrindra hanerena ny fitakiana fametraham-pialan'ny governora Ricardo Rossello noho ny resaka an-tsokosoko misy resaka vetaveta nataon'ny governora tamin'ireo mpiara-dia aminy, ary koa ny fiampangana kolikoly federaly nampangaina tamin'ny fitantananany.
Tonga ireo mpanao fihetsiketsehana avy amin'ny lafivalon'ny nosy amin'ny zavatra antenaina ho iray amin'ireo fihetsiketsehana lehibe indrindra hita tany amin'ny faritanin'i Etazonia, satria ireo mponina dia niangavy ny handroaka an'i Rossello hiala ny toerany.
Ny fihetsiketsehana tao an-drenivohitra San Juan tonga iray andro taorian'ny nanambaran'i Rossello fa tsy hiala izy, fa nitady ny hampitony ny savorovoro tamin'ny fampanantenany fa tsy hitady fifidianana indray na hitohy ho lohan'ny antoko politika mpomba azy. Vao mainka nahatezitra ireo mpitsikera azy izany, izay nanao fihetsiketsehana an-dalambe nandritra ny herinandro mahery.
Ny gazety lehibe indrindra ao amin'ny faritany, El Nuevo Dia, dia nanampy trotraka izany tamin'ny alàlan'ny famakiana ny lohateny voalohany: "Governora, tonga ny fotoana hihainoana ny vahoaka: tsy maintsy mametra-pialana ianao."
Nantsoin'ny mpikarakara ny fanakatonana ny lalana «660,510 + 1», izay maneho ny isan'ny olona nifidy an'i Rossello miampy iray hafa handà ny heviny milaza fa tsy miala izy satria ny vahoaka no nifidy azy.
Andro faha-10 nisesy ho an'ny fihetsiketsehana io, ary betsaka kokoa no nantsoina tamin'ny faran'ny herinandro.
Tao amin'ny horonantsary nalefa tamin'ny Alahady alina tao amin'ny Facebook, nilaza i Rossello fa nankasitraka ny fahalalahan'ny olona maneho hevitra izy. Nilaza ihany koa izy fa manantena ny hiaro tena amin'ny fizotran'ny fitsaram-bahoaka, izay ny dingana voalohany dia notadiavin'ny mpanao lalàna tany Puerto Rico.
"Reko ianao," hoy izy tao amin'ny horonan-tsary fohy. "Nanao hadisoana aho ary nifona."
Ireo pejy 889 momba ny chat amin'ny app Telegram izay voahita hafahafa eo amin'ny governora sy ireo mpiara-miasa akaiky 11 ary mpikambana ao amin'ny fitondrany, lehilahy rehetra, dia naneho ny governora sy ireo mpanolotsainy nanompa ny vehivavy sy ireo mpanesoeso, anisan'izany ireo niharan'ny Hurricane Maria.
Ora vitsivitsy taorian'ny nitenenan'i Rossello ny alahady dia nisy tompon'andraikitra ambony iray hafa nanolotra ny fialany. "Mampalahelo fa ny zava-nitranga tato anatin'ny herinandro vitsivitsy, anisan'izany ny fihetsika hita taratra tamin'ny fanehoan-kevitr'ireo tompon'andraikitra sy mpanolotsaina ny fitondrana ankehitriny, dia tsy mifanaraka amin'ny soatoaviko sy ny fitsipiko," hoy i Gerardo Portela, tompon'andraikitra amin'ny fampiasam-bola, filohan'ny Banky Fampandrosoana ara-toekarena any Puerto Rico ary mpanatanteraka. talen'ny Fahefana ara-bola momba ny trano.
Hatramin'ny nivoahan'ny resadresaka tamin'ny 13 Jolay, an'arivony maro ny Puerto Ricans no nirohotra nankany amin'ny trano ofisialin'i Rossello tao amin'ny hetsi-panoherana lehibe indrindra teto amin'ny nosy hatramin'ny nanehoan'i Puerto Ricans soa aman-tsara ny famaranana ny fiofanana miaramila amerikana amerikana tao amin'ny nosy Vieques mihoatra ny 15 taona maro lasa izay.
Niitatra ihany koa ireo fihetsiketsehana mba hanampiana ireo antso hamahana olana hafa atrehin'ilay nosy, ao anatin'izany ny krizy ara-toekarena mihalalina ary ilay antsoin'ny Puerto Ricans taona an-tsirambina nataon'ny governemanta amerikana.
Ny fikorontanana dia tonga satria ny faritanin'i Etazonia dia sahirana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny rivodoza Maria ary manandrana mandamina indray ny ampaham-bola mitentina 70 tapitrisa dolara ao anatin'ny trosa 13 taona ao amin'ity faritany misy teratany amerikana mihoatra ny telo tapitrisa izay tsy manana solontena feno ao amin'ny Kongresy na mifidy ny filoha.
Nihombo ny tsindry nahazo an'i Rossello hiala satria nitombo ny fiantsoana ny fametraham-pialany ka nahitana ireo superstars mozika Puerto Rico Ricky Martin, Bad Bunny ary Residente ary andiana mpanao politika amerikana nahitana mpikambana ao amin'ny kaongresy avy amin'ny roa tonta, kandidà filoham-pirenena demokratika marobe ary tsy Puerto Rico. -misy solontena mifidy ao amin'ny kaongresy.
Voafidy ho governora i Rossello tamin'ny volana novambra 2016 ary efa ho ny 50 isan-jaton'ny latsa-bato, ary efa nanambara ny fikasany hitady fe-potoana faharoa izy. Nahazo diplaoma tamin'ny MIT miaraka amin'ny mari-pahaizana doctorat amin'ny génétique, izy dia zanaky ny governoran'i Puerto Rico teo aloha Pedro Rossello, izay nanidina tany amin'ny nosy mba hanohana marshal taorian'ny nampahafantarana ampahibemaso ilay resaka.
Ny governora dia ao amin'ny antoko New Progressive Party, izay mitady fanjakana ho an'ny nosy, ary Demokraty koa izy.
Ny fikomiana natao tamin'i Rossello dia nahatonga ny sambo fitsangantsanganana efatra farafahakeliny hanafoana ny fitsidihana an'i Puerto Rico, ary maro ny tompon'andraikitra manahy ny amin'ny vokatr'izany fametraham-pialana amin'ny toe-karena efa marefo izany satria ny nosy dia manangana an'i Maria, tafio-drivotra sokajy 4 izay niteraka tombana mihoatra ny tombana $ 100bn amin'ny fahasimbana.
Ny ahiahy iray hafa dia ny fisamborana olona tsy ela akory izay nahitana fiampangana kolikoly federaly mikendry ireo tompon'andraikitra any Puerto Rico, ao anatin'izany ny lohan'ny masoivoho roa teo aloha, anisan'izany ny sekretera fanabeazana teo aloha Julia Keleher.
Ny hotely hotely Kempinski Hotels dia manitatra any Amerika amin'ny fananana Dominica mihaja vaovao
Vail Resorts hahazo ny Resort Top
Vaovao momba ny dia any Italia
Fampianarana miafina COVID-19 any Italia?
Vaovao momba ny dia any Egypt
Egypt dia nanambara ny setrin'ny famerana COVID-19 vaovao
Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena
Mamelombelona ny dia iraisam-pirenena ny vaksiny
Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza
Ny fianakavian'ireo niharan-doza tany Boeing dia nitaky an'i Biden sy Buttigieg hisolo ny fitantanana FAA
IATA: Ny tinady entana amin'ny rivotra dia mahatratra hatramin'ny avo indrindra amin'ny volana martsa 2021
23 no maty, 79 naratra tao amin'ny fiaran-dalamby tanànan'i Mexico
Premier Private Jets dia mahazo ny Oakland Air FBO ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena any Oakland County
Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany
Nodimandry i Bernard Ziegler, mpahita fahitana Airbus Fly-By-Wire
Vaovao momba ny indostrian'ny cruise
CDC dia manambara ny fitaritana ny fanamarinana ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo
Ny sehatry ny fialan-tsasatra amerikanina sy fialam-boly amerikana dia tratry ny tsy fisian'ny dia iraisam-pirenena sy orinasa